Waxaa jira aqbalo caalami ah oo Android OS casriga ah iyo kiniiniyada. Apple isticmaala qalab waa ka daran yahay la casriga cusub suuqa garaacid ordaya on OS Android sida LG, HTC, Motorola, Sony, Samsung oo laftiisa Google. Dhamaan telefoonada gacanta, kuwaas oo hadda ay leeyihiin shaashad weyn iyo daawashada cajaladaha iyo filimada HD iyaga ku waa xulasho wanaagsan. Daawashada filimada Lugood telefoonka aad Android ayaa had iyo jeer dhibaato.
Apple baaq music videos, filimada iyo dhacdooyin TV in Store Lugood isticmaalaya files M4V. Taa baddalkeeda, faylasha M4V waxaa sida caadiga ah ilaaliyo ilaalinta FairPlay Rights Digital Management copyright ee Apple. Si aad u ciyaaro ah movie telefoonka ama kiniin Lugood M4V socda OS Android ah, DRM ilaalinta (Rights Digital Management) ayaa laga saaro. Taa baddalkeeda, qoraalana video ka Lugood in qaabab la jaan qaada Android waa suurto gal. Out oo ka mid ah afar siyaabood dhigay hoos, waxaad hubaal ka heli doontaa habka ugu kalsoonida badan videos ilaaliyo DRM galay Android OS qaab playable kuu shaqeeya wareejinta. Marka diinta ka ay ka badan tahay, movie Lugood uu noqon doono playable on qalab ah Android sida file kasta oo filim kale.
Gacanta dhaqaaq Files
Pavtube Chewtune Android taariikhqorihii
Tani app Android shaqaysaa mid ka mid ah la Lugood halka syncing aad video content in aalad Android via Wi-Fi ama USB. Marka laga reebo syncing music, waxay u saamaxdaa syncing ee bood dacwadood, play soo oogay, farshaxanka, iyo playlists, iyo kuwo kale. iSyncr sidoo kale u ogolaataa syncing content video cusub ee aalad Android galay maktabadda Lugood ah.
Talaabada 1: Isku qalabka si hagaagsan.
Talaabada 2: Liiska muujinaya aad idil playlists Lugood la soo bandhigi doonaa.
Talaabada 3: taabto files kaliya aad doonayso in aad snyc oo guji bilowdo. Hagaagsan hore qaadan karnaa xoogaa waqti ah, laakiin ka dib markii ay wax walba oo sahlanaan doonto iyo Farax.
Talaabada 4: Raadi codsi ku haboon Android ciyaaryahan warbaahinta iyo bilowdo helitaanka aad content synced maktabadda Lugood ah.
Gacanta dhaqaaq Faylal ay ka Lugood in Your Device Android
Habkan waa mid fudud oo toos ah, laakiin sidoo kale waxa uu noqon karaa daalin, gaar ahaan haddii kaliya labo ka mid ah kuwan raadkaygay gaar ah ayaa loo baahan yahay.
Talaabada 1: Isku qalabka Android oo geli USB Mass Kaydinta ka Mode.
Talaabada 2: In la hubiyo in qalabka ku qoran yahay on your computer.
Talaabada 3: Waa inaad hubisaa in files Lugood yihiin guuriyeen in Lugood Media Folder. Tag Lugood, Edit → Sare, ka dibna hubi ikhtiyaarka "files Copy in Lugood Media Folder markii isagoo intaa ku daray in maktabada".
Talaabada 4: From folder Music ah, doortaan files ka Lugood si toos ah.
Talaabada 5: Copy oo iyaga paste aad kaniini ama folder telefoonka ee.
Fiiro gaar ah: Kuwa la isticmaalayo Mac ah oo doonaya in ay u guuraan files u baahan tahay inaad kala soo baxdo File Transfer ee qalab rasmi ah Android.
Pavtube Chewtune Android taariikhqorihii Tool
Pavtube Chewtune waa qalab la'aan ah in uu diyaar u yahay shay aysan qof oo had iyo jeer diyaar u download.
Talaabada 1: Ka bilow loading faylasha M4V. Ka dib markii socda qalab, ku dar videos sidoo kale ay jiidayeen ama iyaga si toos ah tagtey ama iyaga loo dhoofiyo.
Talaabada 2: Dooro qaabka adigoo gujinaya liiska hoos-hoos iyo MP4 soo xulayaba; waa ugu socon kara qalabka Android.
Talaabada 3: Riix ah "Settings" icon si ay u helaan suuqa kala Settings Profile. Waxaad ka heli doontaa goobaha ee heerka jir, bitrate, codec iyo size video. Details video waxay leeyihiin in la bedelo.
Talaabada 4: Habka diinta Lugood M4V galay Android qaab socon bilaaban doono. Taas waxa loo sameeyaa adigoo riixaya "badalo" icon. Lugood filimada DRM laga saaro iyo duubo bilaabmaa qaab la Android playable. Qalabkani waxa uu shidaa Lugood si toos ah in ay bilaabato ciyaaro file filimka. Waxaad aan la xiro karo ama ka saarto Player daaqadaha.
Talaabada 5: Marka diinta ka ay ka badan tahay, riix "Output Open folder" meesha deg deg ah faylka movie gediyay.
The Wondershare Video Converter Ultimate Habka
Tani waa qalab dareen leh oo caawisa si loogu badalo filimada Lugood iyo kale videos qaab ah la jaan qaada Android si fudud ah interactively.
Talaabada 1: Ka dib markii ay soo degsado iyo ordaya software-ka, keeno filimada Lugood doorashada goobta shaqada dhexe qalab ee.
Talaabada 2: Dooro folder Ahaado iyo qaab wax soo saarka. Taas waxa loo sameeyaa adigoo gujinaya menu qaab dropdown iyo doorashada qaab wax soo saarka sida Android OS ah. In Folder Output ah, dooro folder sax ah in la qabto doonaa gediyay videos.
Tallaabo 3: Ku bilow qaab beddelidda iyo kala iibsiga ee files Lugood galay telefoonka aad Android. Ka dib markii la beddelo goobaha ay sida la doonayo, guji icon "Beddelaan". Marka diinta waa ka badan, la helo filin la gediyay Lugood adigoo gujinaya "Raadi Target".
Waxaad ku xidhi kartaa telefoonka ah Android ama kiniin in PC iyada oo USB ah iyo koraan wareejinta faylasha filimka effortlessly.
Chart Isbarbar ee 4 Hababka
Beyond Details la mid ah sida ay ka saareen ilaalinta DRM iyo diinta files movie Lugood qaababka playable Android, halkan jira siyaabo kala duwan oo ay afar hab oo is barbar dhig. Waxay dalabyo kala duwan oo ka duwan in ay ku caawiyaan in ay soo fikira habka ugu fiican ee aad isku dayi kartaa maanta. Si kastaba ha ahaatee, liiska ma dhammaystirna.
Pavtube Chewtune Tool Habka
Koobiyeynta ee DRM ilaaliyo files
No No Haa Haa
Diinta files Audio
Saaridda of audio ka video
Haa No Haa Haa
No Haa Haa Haa
> Resource > Android > 4 Siyaabaha Daawo Lugood Movie on Android